Etu esi agba oso Email na Gmail | Martech Zone
Etu esi agba oso Email na Gmail
Monday, April 20, 2020 Monday, April 20, 2020 Douglas Karr
Mgbe ụfọdụ ị chọghị onye na-eweta ọrụ email (ESP) zuru oke na mgbịrịgba niile na njikwa njikwa ndepụta, ndị na-ewu email, nnyefe na ngwaọrụ ndị ọzọ nwere ọkaibe. Naanị ịchọrọ ịdepụta ndepụta ma zipụ ya. Ma, n'ezie, ọ bụrụ na ọ bụ ozi ahịa - nye ikike maka ndị folks iji pụọ na ozi ndị ga-abịa n'ọdịnihu. Nke ahụ bụ ebe YAMM nwere ike ịbụ azịza zuru oke.
Ma Mgbakwunye Ozi Ọzọ (YAMM)
YAMM bụ mmemme jikọtara nke enyere Chrome nke na-enyere ndị ọrụ aka iwulite ndepụta (site na mbubata ma ọ bụ Mpempe akwụkwọ Google), hazie ozi email na ịhazi onwe ya, ziga ya na ndepụta ahụ, tụọ nzaghachi, ma jikwaa ndị na-edeghị aha na ihe niile dị mfe.
YAMM: Email Nwepu Nwepu Nfe na Google Mail & Spreadsheets
Tinye kọntaktị gị na Google Sheet - Tinye adreesị email nke ndị ịchọrọ iziga na Google Sheet. Nwere ike were ha na ndị ana-akpọ Google ma ọ bụ bubata ha site na CRMs dịka Salesforce, HubSpot, na Copper.
Mepụta ozi gị na Gmail - Họrọ ndebiri site na gallery anyị, dee ọdịnaya email gị na Gmail, tinye ụfọdụ ịhazi onwe, ma chekwaa ya dị ka ihe ederede.
Zipu mkpọsa gị na YAMM - Gaa azụ na Google Sheets iji zipu ma soro mgbasa ozi email gị yana ozi ọzọ jikọtara. Ga - enwe ike ihu onye bidoro, ewepụghị aha, mepee, pịa ma zaghachi ozi gị ka ị mata ihe ị ga-eziga ha ọzọ.
Iji bido, wụnye YAMM na Google Chrome. YAMM nwere nnukwu akwụkwọ dị ka nke ọma.
Wụnye YAMM na Chrome
Tags: pịaemail mkpọsaGmailgmail nsochiụdị googlegoogle g ụlọotúyamm
Ngosiputa: Omni-Channel Comprehensive Outbound Sales Enablement Platform
COVID-19: Anya ohuru nke atumatu iguzosi ike n'ihe nke usoro ahia